मेथिलप्रेडनिसोलोन बनाम प्रेडनिसोन: भिन्नता, समानता, र जुन अझ राम्रो हो - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
मनोरञ्जन चेकआउट कम्पनी, औषधि जानकारी समाचार, कल्याण कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार भारी खेल खेलहरु समुदाय, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर औषधि बनाम मित्र समाचार औषधि जानकारी, समाचार कम्पनी, समाचार
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> मेथिलप्रेडनिसोलोन बनाम प्रेडनिसोन: भिन्नता, समानता, र जुन अझ राम्रो हो
मेथिलप्रेडनिसोलोन बनाम प्रेडनिसोन: भिन्नता, समानता, र जुन अझ राम्रो हो
मेथिलप्रेडनिसोलोन र प्रेडनिसोन कृत्रिम ग्लुकोकोर्टिकोइडहरू विभिन्न बिरामीहरूमा प्रयोग हुन्छन्। यी औषधिहरू तपाईंको शरीरको एड्रेनल ग्रंथि द्वारा उत्पादित हर्मोनहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ। जब तपाईंको शरीर सामान्य भन्दा आफ्नै उत्पादनको लागि अधिक डोजमा प्रशासित हुन्छ, तिनीहरू विभिन्न मार्गहरूमा कार्य गर्दछन् प्रतिरक्षा र ईन्फ्लेमेटरी मार्करहरू जस्तै ल्युकोट्रिएन्स, प्रोस्टाग्लैन्डिन, किनिन, र हिस्टामाइन्सलाई रोक्न। कार्यको यस संयन्त्रले यी औषधिहरूलाई श्वसन रोग, स्वत: प्रतिरक्षा विकार, र भड़काउने विकारहरूको उपचार गर्न प्रभावकारी हुन अनुमति दिन्छ, केहीको नाम लिन। जबकि दुबै औषधी एकै विकारमा प्रयोग हुन सक्छ, त्यहाँ दुई बीचमा केही भिन्नताहरू छन्।
मेथिलिप्रेडनिसोलोन र प्रेडनिसोन बीचको मुख्य भिन्नता के हुन्?
मेथइल्प्रेडनिसोलोन एक औषधी हो जुन दम, अल्सरेटिव कोलाइटिस, रुमाटोइड गठिया, र एलर्जी प्रतिक्रिया सहित विभिन्न बिरामीहरूमा प्रयोग गरिन्छ। मेथिलप्रेडनिसोलोन एक प्रेडनिसोलोन डेरिवेटिभ हो, र यसको कार्य गर्ने संयन्त्रले यसलाई भित्ता र प्रतिरक्षा बिरामीहरूको एक धेरै विस्तृत विविधतामा उपयोगी बनाउँछ। मेथिलप्रेडनिसोलोनले सेलुलर झिल्ली पार गर्दछ र रिसेप्टर्समा बाँध्छ जुन प्रोटीन संश्लेषण र साइटोकिन्सको उत्पादन रोक्दछ। साइटोकिन्सले भडकाउने प्रक्रियामा प्रमुख भूमिका खेल्छ। यो समान संयन्त्र द्वारा, यसले ल्युकोट्रियन्स र अन्य प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया मार्करहरूको घुसपैठो रोक्दछ। यसले औषधिलाई दुवै एक विरोधी भड़काउने र प्रतिरोधक एजन्टको रूपमा प्रभावकारी बनाउँदछ।
मेथ्याप्लेडिनिसोलोन mg मिलीग्राम, mg मिलीग्राम, १ mg मिलीग्राम, र mg२ मिलीग्राम मौखिक ट्याब्लेटमा उपलब्ध छ। यो समाधानमा पनि उपलब्ध छ जुन अन्तर्देशीय वा इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शनहरूको रूपमा दिन सकिन्छ। मेथिलप्रेडनिसोलोन ट्याबलेटको ब्रान्ड नाम मेडरोल हो। मेथइल्प्रेडनिसोलोन शिशुहरू, बच्चाहरू र वयस्कहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
प्रेडनिसोन एक प्रिस्क्रिप्शन औषधि हो जुन विभिन्न प्रकारका भ्रामक र प्रतिरक्षा विकारहरूमा प्रयोग हुन्छ। प्रेडनिसोन एक कोर्टिसोन डेरिवेटिव हो र सेलुलर झिल्ली पार गर्न कलेजोले यसको सक्रिय रूप, प्रेडनिसोलोनमा मेटाबोलिज गर्नुपर्छ। एक पटक यो झिल्ली पार गरेपछि, यसको संयन्त्र मेथिलिप्रेडनिसोलोनसँग मिल्दोजुल्दो छ कि यसले भड्काउने र प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया मार्करहरूको घुसपैठलाई रोक्छ।
प्रेडनिसोनलाई यसको ब्रान्ड डेल्टासोनले पनि बोलाउन सक्छ। यो २. mg मिलीग्राम, mg मिलीग्राम, १० मिलीग्राम, २० मिलीग्राम, र mg० मिलीग्राम मौखिक ट्याब्लेटमा उपलब्ध छ। यो मौखिक समाधानमा पनि उपलब्ध छ।
Methylprednisolone बनाम prednesone बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग कोर्टिकोस्टेरोइड कोर्टिकोस्टेरोइड
ब्रान्ड नाम के हो? मेडरोल, SoluMedrol डेल्टासन
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? मौखिक ट्याब्लेट, इंजेक्शनको लागि समाधान मौखिक ट्याब्लेट, मौखिक समाधान
मानक खुराक के हो? प्रतिक्रिया र निदानको आधारमा शीर्षकको साथ4मिलीग्रामदेखि mg 48 मिलीग्रामको प्रारम्भिक खुराक प्रतिक्रिया र निदानको आधारमा शीर्षकको साथ mg मिग्रिदेखि mg० मिलीग्रामको प्रारम्भिक खुराक
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? केहि हप्तामा छ दिन वा लामो निदानमा निर्भर रहन्छ। पाँच दिन धेरै हप्ताहरू वा लामो निदानमा निर्भर गर्दछ।
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? शिशुहरू, बच्चाहरू र वयस्कहरू शिशुहरू, बच्चाहरू र वयस्कहरू
प्रेडनिसोनमा उत्तम मूल्य चाहनुहुन्छ?
प्रेडनिसोन मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
यदि तपाइँ यसलाई पहिले लिनुहुन्छ भने योजना बी काम गर्दछ
शर्तहरू methylprednisolone बनाम prednesone द्वारा उपचार
मेथिलप्रेडनिसोलोन रोगका विभिन्न राज्यहरू र विकारहरूको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ। यो इन्फ्लेमेन्टरी प्रक्रियामा हुने असरले गठिया सम्बन्धी विकारहरू जस्तै रुमेटाइड र सोरियाटिक गठिया, स्पन्डिलाइटिस, र बुर्सिटिसमा उपयोगी हुन्छ। यो ब्रोन्कियल दमाहरूको तीव्र ज्वालाहरू उपचार गर्न पनि प्रयोग गरिन्छ। मेथिलप्रेसिडनिसोलोनको इम्युनोस्प्रेसिभ गुणहरूले यसलाई एलर्जीको स्थितिमा प्रभावकारी उपचार बनाउँदछ जस्तै तीव्र एलर्जिक राइनाइटिस, सम्पर्क डर्मेटाइटिस, र औषधि संवेदनशीलता प्रतिक्रिया। यो अन्तःस्रावी, कोलेजेन, रक्तविहीन, जठरांत्र, र नेत्र विकारहरूमा पनि प्रयोग हुन्छ।
प्रेडनिसोन मेथिलिप्रिडनिसोलोनमा समान ईन्फ्लेमेટરી र स्वत: प्रतिरक्षा विकारहरूको विस्तृत श्रृंखलाको उपचार गर्न पनि प्रयोग गरिन्छ। यसमा वायमेटिक, श्वासप्रश्वास, एलर्जी, अन्तःस्रावी, कोलेजेन, हेमेटोलोगिक, जठरांत्र, र नेत्र विकारहरू पर्छन्।
तलको तालिका, विस्तृत भए पनि यी दुई औषधिहरूको हरेक प्रयोगलाई सूचीबद्ध नगर्न सक्छ। प्रयोगका संकेतहरूमा थप जानकारीको लागि कृपया तपाईंको स्वास्थ्यसेवा प्रदायकसँग सल्लाह लिनुहोस्।
सर्त मेथिलप्रेडनिसलोन प्रेडनिसोन
जन्मजात अधिवृक्क हाइपरप्लासिया हो हो
Nonsuppurative थाइरोइडिटिस हो हो
संधिशोथ हो हो
एन्कोइलोजिंग स्पोन्डिलाइटिस हो हो
तीव्र बर्साइटिस हो हो
ओस्टियोआर्थराइटिसको साइनोवाइटिस हो हो
सोरियाटिक गठिया हो हो
प्रणालीगत लुपस एरिथेमाटोसस हो हो
गम्भीर seborrheic dermatitis हो हो
गम्भीर सोरायसिस हो हो
अप्टिक न्युराइटिस हो हो
प्रतीकात्मक सारकोइडोसिस हो हो
आकांक्षा निमोनियाइटिस हो हो
Idiopathic थ्रोम्बोसाइटोपेनिक Purura हो हो
अल्सरेटिव कोलाइटिस हो हो
बहु Sclerosis को तीव्र exacerbations हो हो
के मेथाइलप्रेडनिसोलोन वा प्रेडनिसोन बढी प्रभावकारी छ?
त्यहाँ धेरै तरीकाहरू छन् methylprednisolone र प्रेडनिसोनको तुलनाको तिनीहरूको विस्तृत दायराको कारण। प्रायः भडकाउने प्रक्रियाहरूमा, कोर्टिकोस्टेरोइड्सको उपचार अस्वस्थताको गम्भीर र गम्भिर तीव्रतामा छोटो अवधिको प्रयोगमा सीमित छ। Methlprednisolone र prednesone लाई सीधा तुलना गर्दा4मिलीग्राम methlprednisolone pred मिलीग्राम प्रेडनिसोन बराबर हुन्छ। जे होस्, जब प्रतिक्रिया समायोजन र अनुगमन गरीएको छ, प्रत्येक उपचारमा प्रभावकारी हुन सक्छ।
एक अध्ययन तुलना गर्न खोजे इंट्रावेनस मेथिलिप्रेडनिसोलोन को प्रभाव बच्चाहरूमा तीव्र दमको समस्यामा मौखिक प्रेडनिसोनको लागि। दुई उपचार समूहहरू यादृच्छिक गरीएको थियो या त mg० मिलीग्राम इंट्रावेनस मेथिलिप्रेडनिसोलोन वा mg० मिलीग्राम मौखिक प्रेडनिसोन प्राप्त गर्न। दुबै समूहले अल्बुटेरोल प्राप्त गरे, र अन्वेषकहरूले लाक्षणिक राहत, पीक एक्स्पेरी फ्लो (पीईएफ), र नाडी ऑक्सीमेट्री रीडिंगको मूल्यांकन गरे। प्रत्येक समूहको लागि दुई, चार, र छ घण्टामा उपचार शुरू गरेपछि पढाइ लिइयो। त्यहाँ दुई समूह बीचको प्रत्येक अन्तरालमा कुनै क्लिनिक वा सांख्यिकीय रूपमा महत्त्वपूर्ण भिन्नता थिएन। अन्वेषकहरूले निष्कर्ष निकाले कि कम लागत र कम आघातिक प्रशासनको कारण मौखिक प्रेडनिसोन उच्च विकल्प हुनेछ।
Methylprednisolone मा सबै भन्दा राम्रो मूल्य चाहनुहुन्छ?
Methylprednisolone मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
कभरेज र मेथिलिप्रेडनिसोलोन बनाम प्रेडनीसोनको लागत तुलना
मेथइल्प्रेडनिसोलोन एक औषधि हो जुन सामान्यतया दुबै वाणिज्य बीमा योजनाहरू साथै मेडिकेयरले कभर गर्दछ। २१ मिलीग्रामको २१ ट्याब्लेटको six दिने पाठ्यक्रम ब्रान्ड नामको लागि $ १०० सम्म लिन सक्दछ। सिंगलकेयरबाट कूपनको साथ, तपाईं thy १ as भन्दा कममा मेथिल्प्रेडडिनिलोन लिन सक्नुहुन्छ।
प्रेडनिसोन एक प्रिस्क्रिप्शन औषधि हो जुन सामान्यतया दुबै वाणिज्य बीमा योजनाहरू र मेडिकेयरले कभर गर्दछ। प्रेडनिसोनको औसत खुद्रा मूल्य २० मिलीग्रामको १० ट्याब्लेटको लागि लगभग $ २२ हो। तपाईं एक सिंगलकेयर कूपनको साथ pres4मुनिको लागि यो पर्ची पाउन सक्नुहुनेछ।
यो ध्यान दिनु महत्त्वपूर्ण छ कि केहि रोग राज्यहरूका लागि, कोर्टिकोस्टेरोइड मेडिकेयर ड्रग बेनिफिट अन्तर्गत कभर हुन सक्दैन, तर मेडिकेयर भाग बी अन्तर्गत कभर हुन सक्छ। तपाईको फार्मासिष्टले कभरेजको बारेमा अधिक जानकारी प्रदान गर्न सक्छ।
मानक खुराक २१, mg मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू १०, २० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे सामान्यतया< but may vary depending on the plan सामान्यतया< but may vary depending on the plan
एकलकेयर लागत $ १ + + । 4- $ 6
मेथिलिप्रेडनिसलोन र प्रेडनिसोनको सामान्य साइड इफेक्टहरू
प्रेडनिसोन कलेजोले यसको सक्रिय मेटाबोलिट प्रेडनिसोलोनलाई मेटाबोलिज गराएको छ। Prednesolone र methylprednisolone रासायनिक धेरै समान छन्, र त्यसैले तिनीहरूको सम्भावित साइड इफेक्टको नजिकबाट एक अर्का मिरर।
ग्लुकोकोर्टिकोइड्स तरल पदार्थ र इलेक्ट्रोलाइट असंतुलनको लागि परिचित छन् जसले सोडियम र फ्लुइडर रिटेन्सन, उच्च रक्तचाप, र केहि मामिलामा कन्जेस्टीभ हृदय विफलता निम्त्याउन सक्छ। मेथिलप्रेडनिसोलोन र प्रेडनिसोनले मांसपेशि कमजोरी र मांसपेशीहरूको ह्रासको कारण पनि निम्त्याउन सक्छ। ग्लुकोकोर्टिकोइड्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रणालीको लागि अवरोधको रूपमा चिनिन्छ र मतली, बान्ता, वा पेट ब्लोटिंग हुन सक्छ। स्टेरोइड घाउहरु को उपचार धीमा हुन सक्छ। लामो समयसम्म मेथिलिप्रेडनिसोलोन र प्रेडनिसोनको प्रयोगले बच्चाको विकासलाई सुस्त बनाउन सक्छ र यस कारणका लागि, तिनीहरूको प्रयोग लक्षणहरूको छुटकारा पाउन सम्भव भएसम्म कम अवधिमा सीमित हुनुपर्दछ।
ग्लुकोकोर्टिकोइड्सले शरीरको ईन्सुलिनको प्रतिक्रियालाई बिगार्न सक्छ। दीर्घकालीन स्टेरोइड थेरापीमा बिरामीहरूलाई मधुमेह हुने सम्भावना चार गुणा बढी हुन सक्छ। इंजेक्शन ईन्सुलिन वा अन्य एन्टिडाएबेटिक ड्रगमा निर्भर बिरामीहरूले स्टेरोइडमा हुँदा उनीहरूको डोज बढाउनु पर्दछ। मधुमेह रोगीहरूले स्टेरोइड्सको छोटो अवधिको समेत आफ्नो रगतमा चिनी बढेको देख्नु असामान्य कुरा होइन।
निम्नलिखित तालिका साइड इफेक्टको एक विस्तृत सूची हुने उद्देश्यले गरिएको छैन। सबै साइड इफेक्टहरूको पूर्ण सूचीको लागि कृपया तपाईंको फार्मासिष्ट वा चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस्।
नाक भीड र घाँटी दुखाइ को लागी सबै भन्दा राम्रो औषधि
सोडियम प्रतिधारण लागू फ्रिक्वेन्सी लागू फ्रिक्वेन्सी
तरल पदार्थ प्रतिधारण हो परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
कन्जेस्टिभ मुटुको असफलता हो परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
तौल हो परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
मांसपेशी कमजोरी हो परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
अस्टियोपोरोसिस हो परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
लामो हड्डी भंग हो परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
पेप्टिक अल्सर हो परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
अग्नाशयशोथ हो परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
पेटको रोकथाम हो परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
बिरामी घाउ निको पार्ने हो परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
अनुहार इरिथेमा हो परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
पसिना बढेको हो परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
टाउको दुखाई हो परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
भर्टिगो हो परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
मुड परिवर्तन हो परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
विकास दमन हो परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
इन्सुलिन प्रतिरोध हो परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
मोतिबिन्दु हो परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
मुहान: मेथिलप्रेडनिसलोन (डेलीमेड) प्रेडनिसोन (डेलीमेड)
मेथिलिप्रेडनिसलोन र प्रेडनिसोनको ड्रग अन्तरक्रिया
मेथिलप्रेडनिसोलोन र प्रेडनिसोन साइटोक्रोम पी 5050० एन्जाइम A ए of को प्रत्येक सब्सट्रेटहरू हुन्। कलेजोमा P450 एन्जाइम प्रणाली धेरै औषधिहरूको मेटाबोलिजमको लागि जिम्मेवार हुन्छ, र यसैले त्यहाँ धेरै औषधीको अन्तरक्रियाको लागि सम्भाव्यता छ।
Corticosteroids सामान्यतया बिरामीहरूमा प्रयोग गरिन्छ जो अन्य इम्युनोप्रप्रेसन्ट एजेन्टहरूमा पनि हुन्छन्। अंग प्रत्यारोपण र केही स्वचालित प्रतिरोधात्मक विकारमा शरीरको प्रतिक्रियालाई नियन्त्रण गर्न एक भन्दा बढी प्रतिरोधात्मक एजेन्टको आवश्यकता हुन सक्छ। एक एजेन्टले अर्कोको मेटाबोलिज्मलाई असर गर्न सक्छ, तर ती अझै पनि सँगै प्रयोग गर्न सकिन्छ यदि राम्रोसँग अनुगमन गरियो भने। उदाहरण को लागी, tacrolimus र cyclosporine CYP 3A4 को प्रत्येक अवरोधकर्ता हो। यसले मेथिलिप्रेडनिसोलोन वा प्रेडनिसोनको सीरम सांद्रता बढाउन सक्दछ जब सँगसँगै प्रयोग गरिन्छ। साइक्लोस्पोरिन र मेथिलप्रेडनिसोलोनको साथ प्रयोगको साथ आक्षेपका घटनाहरू रिपोर्ट गरिएका छन्, यद्यपि यो विरलै छ।
लूप डायरेटिक्सले पोटेशियम फिल्टर गरेर शरीरमा तरल पदार्थ स्थिति प्रबन्ध गर्न मद्दत गर्दछ। जब मेथिलिप्रेडनिसोलोन वा प्रेडनिसोनको साथ दिइन्छ, तथापि, त्यहाँ शरीरमा ठूलो मात्रामा पोटेशियम गुमाउने सम्भावना हुन्छ। यसले कार्डियक समारोहमा नकरात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। बिरामीहरू जसले यी सँगै लिनुपर्दछ उनीहरूको इलेक्ट्रोलाइट स्थिति नजिकबाट निरीक्षण गर्नुपर्दछ।
तलको तालिका सबै सम्भावित साइड इफेक्टहरूको सूची होईन। पूर्ण सूचीका लागि कृपया तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
औषधि ड्रग क्लास मेथिलप्रेडनिसलोन प्रेडनिसोन
Upadacitinib सिग्नल ट्रान्सडक्शन इन्हिबिटरहरू (STI): इम्युनोसप्रेसन्ट्स हो हो
Siltuximab इम्युनोग्लोबुलिन: इम्युनोसप्रप्रेसन्ट्स हो हो
ट्याक्रोलिमस क्याल्सिनेउरिन अवरोधकर्ता: इम्युनोसप्रेसन्ट हो हो
साइक्लोस्पोरिन चक्रीय पेप्टाइड: इम्युनोसप्रेसन्ट हो हो
Fosaprepitant NK1 रिसेप्टर विरोधी: विरोधी मतली हो हो
Itraconazole Azole antifungals हो हो
डेसमोप्रेसिन वासोप्रेसिन एनालग हो हो
Diltiazem क्याल्सियम च्यानल अवरोधक हो हो
रिफाम्पिन एन्टिट्यूबिकुलर हो हो
Phenytoin एन्टिकोनभल्सेन्ट हो हो
टोर्सिमाइड लूप डायरेटिक्स हो हो
सेलेकोक्सिब NSAIDs हो हो
हाइड्रोक्लोरोथियासाइड थायाजाइड डायरेटिक्स हो हो
मेथिलिप्रेडनिसलोन र प्रेडनिसोनको चेतावनी
Corticosteroids ले संक्रमणको संकेतहरू मास्क गर्न सक्छ र नयाँ संक्रमणको खोजीलाई ढिला बनाउन सक्छ। लामो समयसम्म मेथिलिप्रेडनिसोलोन र प्रेडनिसोनको प्रयोगले मोतियाबिन्दु र जलबिन्दु निम्त्याउन सक्छ।
गर्भवती महिलाहरूमा कोर्टिकोस्टेरोइड्सको कुनै नियन्त्रण-प्राप्त अध्ययन गरिएको छैन, त्यसैले उनीहरूको गर्भावस्थामा प्रयोग मात्र हुन सक्दछ जब यो स्पष्ट हुन्छ कि लाभले कुनै पनि जोखिमलाई पछाडि राख्छ। गर्भावस्थामा कोर्टिकोस्टेरोइडहरू प्रयोग गर्ने आमाहरूमा जन्मेका शिशुहरूलाई हाइपोएड्रेनेलिज्मको लागि अवलोकन गर्नुपर्छ।
Corticosteroids, विशेष गरी अधिक मात्रामा, खोप दिईएको बेला शरीरको एन्टिबडीहरू उत्पादन गर्ने क्षमतालाई अवरोध पुर्‍याउँछ। खोपहरू स्टेरोइडहरू प्राप्त गर्ने बिरामीहरूमा प्रभावी नहुन सक्छ। चेयरपक्स जस्ता लाइभ खोपहरू, कोर्टिकोस्टेरोइड थेरापी गरिरहेका बिरामीहरूलाई दिनु हुँदैन। इम्युनोसप्रेसिभ एजेन्ट लिने बिरामीहरूलाई प्रत्यक्ष खोपबाट संक्रमणको जोखिम बढी हुन्छ।
मेथइल्प्रेडनिसोलोन र प्रेडनिसोनले छाला परीक्षण वा अन्य एलर्जी परीक्षणको नतिजा बदल्न सक्छ। सब भन्दा सहि नतिजाहरूको लागि, यी परीक्षणहरू सञ्चालन गर्नु भन्दा पहिले दिनहरू स्टेरोइड रोक्नु पर्छ।
स्टेरोइड केवल छोटो अवधि को लागी इच्छित प्रभावहरु प्राप्त गर्न को लागी प्रशासित हुनु पर्छ। यदि स्टेरोइडको दीर्घकालीन प्रयोग औषधीय रूपमा आवश्यक छ भने, तिनीहरूलाई न्यून प्रभावकारिता खुराकमा राख्नुपर्दछ।
मेथिलिप्रेडेनिसलोन बनाम प्रेडनीसोनको बारेमा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
मेथिलप्रेडनिसोलोन भनेको के हो?
मेथइल्प्रेडनिसोलोन एक सिंथेटिक ग्लुकोकोर्टिकॉइड हो जुन विभिन्न प्रकारका भड़काउने र स्वत: प्रतिरक्षा विकारहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो मौखिक ट्याब्लेटको रूपमा र एउटा इंजेक्शनको रूपमा उपलब्ध छ। सबैभन्दा सामान्य उपचार अवधि छ दिनको मौखिक उपचार हो।
प्रेडनिसोन भनेको के हो?
प्रेडनिसोन एक ग्लुकोकोर्टिकॉइड हो जुन कलेजोले यसको सक्रिय रूप, प्रेडनिसोलोनमा मेटाबोलिज गरिन्छ। यो धेरै प्रदाहक र स्वत: प्रतिरोध रोगहरूमा पनि प्रयोग हुन्छ। प्रेडनिसोन मौखिक ट्याब्लेटहरू र मौखिक समाधान सूत्रहरूमा उपलब्ध छन्। प्रेडनिसोनको गहन प्रयोग सामान्यतया पाँच-दिनको आहार हो।
के मेथिल्प्रेडनिसोलोन र प्रेडनिसोन उस्तै छन्?
यद्यपि ती दुबै ग्लुकोकोर्टिकोइडहरू हुन्, मेथाइलप्रेडनिसोलोन र प्रेडनिसोन बिल्कुल उस्तै छैनन्। प्रेडनिसोन शरीरमा प्रभाव पार्न यसको सक्रिय रूप, प्रेडनिसोलोनमा मेटाबोलिज हुनुपर्दछ। Thy मिलीग्राम मेथिलिप्रेडनिसोलोनको एक खुराक mg मिलीग्राम प्रेडनीसोनको बराबर हो।
के मेथिलप्रेडनिसोलोन वा प्रेडनिसोन राम्रो छ?
मेथाइलप्रिडनिसोलोन र प्रेडनिसोनले प्रत्येक लक्षण लक्षणहरू कम गर्न सक्दछ जब तिनीहरूको खुराकहरू उचित रूपमा शुरू गरिन्छ। कम लागत र प्रशासनको सहजताको कारण मौखिक फार्मुलेसनहरू इन्जेक्शन योग्य योगनहरू भन्दा बढी रुचाउन सकिन्छ।
के म गर्भवती हुँदा मेथिलप्रेडनिसोलोन वा प्रेडनिसोन प्रयोग गर्न सक्छु?
मेथिलप्रेडनिसोलोन र प्रेडनिसोन गर्भावस्था जोखिम कोटी सी हुन्। यसको मतलब त्यहाँ कुनै नियन्त्रणित मानव अध्ययनहरू छैनन् कि प्रमाणित गर्भावस्थामा औषधी सुरक्षित छ। यी औषधीहरू केवल तब प्रयोग गर्नुपर्नेछ जब लाभ स्पष्ट रूपमा जोखिमलाई पछाडि पार्छ।
म म्याथिल्प्रेडनिसोलोन वा मदिराको साथ प्रेडनिसोन प्रयोग गर्न सक्छु?
रक्सी कलेजोद्वारा मेटाबोलिज हुन्छ। लगातार रक्सीको सेवनले शरीरको प्रेडनिसोनलाई यसको सक्रिय फाराममा मेटाबोलिज गर्न सक्ने क्षमतालाई असर गर्न सक्छ। मदिरा र ग्लुकोकोर्टिकोइड्सले दुबै ग्यास्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। मदिरा प्रयोग उत्तम स्टेरोइड उपचार को पाठ्यक्रम को समयमा न्यूनतम छ।
के मेथिल्प्रेडनिसोलोन कडा स्टेरोइड हो?
जबकि मेथिलिप्रेडनिसोलोन प्रेडनिसोन भन्दा २०% बढी सामर्थ्यवान हुन्छ, यो डेक्सामेथासोन वा बिटामेथासोन जस्ता अन्य ग्लुकोकोर्टिकोइड्सको क्षमता मात्र एक-पाँचौं हो। यद्यपि यो हाइड्रोकार्टिसोन भन्दा पाँच गुणा बढी सामर्थ्यशाली छ।
काम गर्न सुरु गर्न म्याथिल्प्रेडनिसोलोनलाई कति समय लाग्छ? / Methylprednisolone छिटो अभिनय छ?
मेथइल्प्रेडनिसोलोनको एक द्रुत सुरुवात छ। मौखिक खुराक पछि एक देखि दुई घण्टा भित्र यो चरम प्रभावमा पुग्छ, र एक अन्तर्देशीय खुराकको एक घण्टा भित्र। यो कलेजोले निष्क्रिय मेटाबोलिट्समा मेटाबोलिज हुन्छ जुन पेशाबमा उत्सर्जित हुन्छ। मेथिलिप्रेडनिसोलोनको आधा जीवन १ 18 देखि hours 36 घण्टा हो जसको अर्थ शरीरबाट ड्रग पूर्णतया हटाउन २ देखि days दिन लाग्न सक्दछ।
कसरी कोरोनाभाईस पछि स्वाद र गन्ध पुनः प्राप्त गर्न
मधुमेह को लागी उपवास रक्त शर्करा के हुनु पर्छ
किन monistat7जलाउँछ र खुजली हुन्छ
के तपाइँ tylenol चिसो संग ibuprofen लिन सक्नुहुन्छ
पर्ची औषधि औषधि परीक्षण मा देखाइन्छ
एक ह्या hang्गओभर मा प्राप्त गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो तरीका हो